သူမရဲ့ချစ်သူကို ပရိသတ်ကြီးသိအောင် ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာ အရမ်းကို ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် တက်လာ ပါတယ်နော်။ ဒီပုံလေး ကတော့ ရေဗက္ကာဝင်းတင်ထားတဲ့ နေရွှေသွေးအောင်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အရင်လလောက်က ရေဗက္ကာဝင်းတစ်ယောက် ချစ်သူရသွားပြီလို့ ချပြခဲ့တာ မှတ်မိကြလောက်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ်များက သူမရဲ့ အရင်ယောကျာ်းကို မယ်လိုဒီမှ လုယူသွားတဲ့ အတွက် သနားကရုဏာသက် ခဲ့ကြတာပါနော်။ဒီနေ့တက် လာတဲ့ ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး ဒီအချိန်မှာ လုပ်ရက်လွန်းတဲ့ သူမကို ပြောဆိုနေကြတာပါနော်။ ဒီပုံကတော့ မကြာသေးခင်က နေရွှေသွေးအောင်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ရိုက်ထားတာပါနော်။
အခုပုံကို ရေဗက္ကာဝင်းမှ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နေရွှေသွေးအောင် ဘက်မှ Photo Tag တောင် မဖွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့် အားလုံးက လှောင်ပြောင်နေကြတာပါနော်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးလည်း နိုင်ငံရေး အခြေအနေဆိုးဝါးနေချိန်မှာ အချိန်ကိုက် စစ်တပ်ဘက်က လူနဲ့ ကြိုက်သွားတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်းကို ဘာပြောချင်ကြပါသေးလဲနော်….
သူမရဲ့ခဈြသူကို ပရိသတျကွီးသိအောငျ ဓာတျပုံနဲ့တကှ ထုတျဖျောပွသလိုကျတဲ့ ရဗေက်ကာဝငျး
ပရိသတျကွီးရေ ဒီနမှေ့ာ အရမျးကို ထူးဆနျးလှနျးတဲ့ ဓာတျပုံ တဈပုံ ဆိုရှယျမီဒီယာတှငျ တကျလာ ပါတယျနျော။ ဒီပုံလေး ကတော့ ရဗေက်ကာဝငျးတငျထားတဲ့ နရှေသှေေးအောငျနဲ့ ရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံလေး ဖွဈပါတယျနျော။ အရငျလလောကျက ရဗေက်ကာဝငျးတဈယောကျ ခဈြသူရသှားပွီလို့ ခပြွခဲ့တာ မှတျမိကွလောကျမယျ ထငျပါတယျနျော။
ပရိသတျမြားက သူမရဲ့ အရငျယောကျြားကို မယျလိုဒီမှ လုယူသှားတဲ့ အတှကျ သနားကရုဏာသကျ ခဲ့ကွတာပါနျော။ဒီနတေ့ကျ လာတဲ့ ဓာတျပုံကိုကွညျ့ပွီး ဒီအခြိနျမှာ လုပျရကျလှနျးတဲ့ သူမကို ပွောဆိုနကွေတာပါနျော။ ဒီပုံကတော့ မကွာသေးခငျက နရှေသှေေးအောငျရဲ့ မှေးနမှေ့ာ ရိုကျထားတာပါနျော။
အခုပုံကို ရဗေက်ကာဝငျးမှ စတငျခဲ့တာဖွဈပွီး နရှေသှေေးအောငျ ဘကျမှ Photo Tag တောငျ မဖှငျ့ပေးခဲ့တာကွောငျ့ အားလုံးက လှောငျပွောငျနကွေတာပါနျော။ ကဲ ပရိသတျကွီးလညျး နိုငျငံရေး အခွအေနဆေိုးဝါးနခြေိနျမှာ အခြိနျကိုကျ စဈတပျဘကျက လူနဲ့ ကွိုကျသှားတဲ့ ရဗေက်ကာဝငျးကို ဘာပွောခငျြကွပါသေးလဲနျော….
စစ်ဘေးရှောင်တွေကို ကူညီဖို့ ခရီးသွားရန် ကိုဗစ်ရှိမရှိ စစ်ကြည့်ရာမှ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်း သိရှိလိုက်ရတဲ့ ဘင်ဂျမင်